लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दबाब - Online sakharapur
रबि लामिछानेलाई कैदीको रुपमा देख्दा श्वेता खड्का रोईन् !! भेटेर आएपछि जेलभित्रको सबै रहस्य खोलिन् (भिडियो हेर्नुस)
रविको पक्षमा बुटवलमा उर्लियो जनसागर, फिदिममा पनि रविको पक्षमा आ*न्दोलन
सलमानको ‘दंबग ३’ एकसाथ चार भाषामा रिलिज हुने
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लोक सेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न दबाब
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्आ,योगले ५ सय २१ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न ९ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीको माग गर्दै सो विज्ञापन खुलाइएको हो ।
आयोगले संविधानको मर्म विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उनीहरुले आरक्षण बचाऔं आन्दोलन मार्फत सो प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको राजीनामा माग गरेका छन् ।
सो प्रदर्शनीमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका नागरिकहरुको सहभागिता रहेको छ ।यसअघि काठमाडौंको सुन्धारा, भृकुटीमण्डप, थापाथली र बानेश्वरबाट माइतीघर मण्डलासम्म ¥याली निकालिएको थियो ।
सो प्रदर्शनमा टाउकोमा रातो कपडा बाध्नुका साथै ब्यानर र पर्चा बोकिएको थियो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
यी हुन् आफ्नै आमालाई मार्न लगाउने राक्षसनि छोरी !
खान-पिनमा सलमान खानले एक दिनमा कति खर्च गर्छन् थाहा छ ? हर्नुहोस सलमान खानको खर्च !
सिंहदरबारभित्रै गैडाको खाग चोरी भएपछि…
६९ वर्षमा एसइई दिएकी युग माया कार्की डी प्लस ग्रेड सहित उतिर्ण !!